Ny teny fampidiran-draharaha feno indrindra ho an'ny vovony ety anaty etona Megestrol | AASraw
Ny fampidiran-danja indrindra amin'ny vovoka azetrol Megetrol
/Blog/Megestrol acetate/Ny fampidiran-danja indrindra amin'ny vovoka azetrol Megetrol
Posted on 07 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Megestrol acetate. Manana izany 0 Comment.
Ny zava-drehetra momba ny vovony etona Megestrol
Ny valin'ny 1.Megestrol acetate (CAS: 595-33-5)
2.How miasa amin'ny asan'ny Megestrol?
3.Manao ny mofomamy acetate megestrol tsara indrindra?
4. Inona no fepetra manokana alohan'ny handraisana ny vovony acetate megestrol?
5. Ahoana no tokony hizarako vovoka acetate megestrol?
6.Use ny mitefoka Megestrol acetate amin'ny vondron'olona manokana
7. Inona no tokony ho fantatro momba ny fitehirizana sy ny fanafodin'ity fanafody ity?
Ny 9.Megestrol fampiasana ny fampiasana herin'aratra dia tokony hodinihina tsara
10. Inona no fampahalalana manan-danja tokony ho fantatro momba ny vovony Megetrol Acetate?
11.Ka aiza no azoko anomezana fanazavana bebe kokoa momba ny Megestrol Acetate?
Megestrol acetate video vidéo
I.Megestrol acetate poids ireo karazana fototra:
Name: Megestrol acetate poids
Formula Molecular: C19H26O3
Meny fitetezana 302.41
1. Megestrol acetateHevitra (čas:595-33-5)
Ny vinaingitra azetrol Megetrol dia karazana fitsaboana hormonina. Antsoina koa hoe Megace na megestrol (595-33-5). Izy io dia olona voan'ny hogone progesterone. Ny progesterone dia iray amin'ireo hormones vehivavy saingy ny lehilahy ihany koa dia mamokatra kely izany.
Megestrol acetate vovoka dia fitsaboana ho an'ireo kansera manaraka izay niverimberina na niely tamin'ny toerana nanombohan'izy ireo.
♦ kanseran'ny raboka
Izany koa dia fitsaboana mahakivy. Mety hanome soso-kevitra anao ny dokotera raha toa ka very maina izany noho ny homamiadana na ny fitsaboana azy. Mety hampiasa azy io koa ny dokotera ho fitsaboana ny vehivavy izay mifoka rongony noho ny homamiadany na ny fitsaboana azy.
2. Ahoana no Megestrol acetatemiasa?
Megestrol acetate dia karazana fitsaboana hormonina. Ny hormonina dia zavatra simika izay entin'ny vatana amin'ny vatana, izay miditra amin'ny rà ary mampisy fiantraikany amin'ny sela hafa. (Ohatra, ny testosteron hormone atao amin'ny testicles dia tompon'andraikitra amin'ny toetry ny lahy, toy ny fandalinana ny feo sy ny volo amin'ny vatana). Ny fampiasana hôpitoriana hormonina ho entina homamiadana dia mifototra amin'ny fijerena fa ny solona ho an'ny hormonina manokana izay ilaina amin'ny fitomboan'ny sela dia eo amin'ny sehatry ny sela misy sela. Ny fitsaboana hormonina dia miasa; tsy manakana ny famokarana hormonina iray, manakana ny mpitsabo hormonina, na manolo ireo mpikaroka simika mitovy amin'ny hormone mivaingana, izay tsy azo ampiasaina amin'ny sela tumor. Ny karazana fitsaboana hormone isan-karazany dia sokajiana amin'ny asany sy / na ny karazana hormone izay vita.
Megestrol acetate dia progestin (endrika nataon'olombelona amin'ny hogone progesterone). Manana toetra izay manelingelina ny tsingerim-pitomboana mahazatra. Manelingelina ny fampiroboroboana ny sela eo amin'ny sela misy tsiranoka ao amin'ny estrogen. Misy koa ny fiantraikany mivantana amin'ny fanesorana ny rindrin'ny tranonjaza (endometrium).
Ny voka-dratsin'ny Megestrol acetate dia ny fahazoana mavesatra. Tsy mazava ny fomba fiasan'io fiantraikany io, na izany aza, ny vokany dia miteraka fitomboan'ny vatana. Ny fampiasana an'io fiantraikany io, ny acetate Megestrol dia nodinihina sy nampiasaina mba hikarakarana ny fahaverezan'ny voankazo (anorexia), ny fandosiran'ny muscle (cachexia) ary ny fahaverezan'ny voan'ny kansera sy ny SIDA.
3. Ahoana no fomba tsara indrindra anaovana ny vovoka megestrol acetate?
Ampiasao ity fanafody ity (Vovon-tsakafo Megestrol) araka ny baikon'ny dokotera. Vakio ny fampahalalana nomena anao. Araho tsara ny torolalana rehetra.
• Mba hahazoana tombontsoa be indrindra, aza adino ny dosage.
• Mijero foana ity fanafody ity (Megestrol acetate) satria efa nolazain'ny dokotera anao na ny mpitsabo hafa, na dia mahatsapa tsara anao aza.
Inona no ataoko raha tsy mitandrina doka aho?
- Raiso ny dosa tsy nahy raha vao mieritreritra an'izany ianao.
• Raha toa ka akaiky ny fotoana ho an'ny dôszinao manaraka, tsidiho ny dosa tsy voatanisa ary miverena amin'ny fotoana mahazatra anao.
• Aza mandray dòz 2 amin'ny fotoana iray na fanampiny.
4. Inona no fepetra manokana alohan'ny handraisana ny vovony ety anaty etona megestrol?
• Lazao amin'ny dokotera sy ny pharmacista raha tsy mahazatra anao ny vata-panafody megestrol, na ny fanafody hafa, na ny zavatra entina ampiasain'ny meketrol mipetaka, ny fampiatoana, na ny fampiatoana. Anontanio ny dokotera na ny pharmacist anao amin'ny lisitra misy ireo singa tsy mamokatra.
• Lazao amin'ny dokotera sy pharmacista anao ny fanafody sy ny vitaminina, ny fanafody amin'ny sakafo, ary ny vokatra azo avy amin'ny fôsily izay azonao na sainao hatao. Aza adino ny milaza antibiotika sy indinavir (Crixivan). Ny dokotera dia mety mila manitsy ny fatran'ny fanafody na manara-maso anao amin'ny fiantraikany amin'ny vokany.
• Lazao amin'ny dokotera raha manana na misy vatany misy rà na aiza na aiza ao amin'ny vatana, diabeta, diabeta, na marary na aretina amin'ny aty.
• Lazao amin'ny dokotera raha bevohoka ianao, maniry ny ho bevohoka na hiteraka. Raha bevohoka ianao rehefa maka vinaingitra mipetaka megestrol, antsoy avy hatrany ny dokotera. Ny vovoka megestrol acetate dia mety hanimba ny foetus. Aza mihinan-kanina rehefa mandray ny vovony azafrol megestrol ianao.
- Tokony ho fantatrao fa vovobony matevina ny megestrol dia mety hanelingelina ny vanim-potoana ara-potoana ara-dalàna amin'ny vehivavy. Aza mieritreritra anefa fa tsy ho bevohoka ianao. Ampiasao ny fomba amam-pitondran-tena mahazatra mba hisorohana ny vohoka.
• Raha misy fandidiana, anisan'izany ny fandidiana amin'ny dental, mandritra na fotoana fohy aorian'ny fitsaboana, lazao amin'ny dokotera na ny dokotera fa ianao dia mandray megestrol acetatevovoka.
Makà araka ny presangarin'ny dokotera. Aza miditra amin'ny isa lehibe kokoa na kely kokoa, na ela kokoa noho izay voatondro. Araho ireo torolàlana eo amin'ny mari-pamantarana misy anao.
Atsangano tsara ny fampidirana am-bava (rano) mialohan'ny handrefesanao ny doka. Alaivo ny menaka miaraka amin'ny menaka fanasan-dôlea manokana na kalsioma, fa tsy amin'ny latabatra fisakafoana mahazatra. Raha tsy manana fitaovana fitsaboana ianao, dia mangataha amin'ny mpitsabo anao.
Megace ES dia manana fifandimbiasan-tsakafo megestrol megestrol bebe kokoa noho i Megace. Raha manova ny marika, ny tanjaka, na ny karazana matevina matevina ny dokotera, dia mety hiova ny filànao. Anontanio ny mpanamboatra anao raha manana fanontaniana momba ny fitsaboana azonao amin'ny pharmacy.
Mety mila miova ny filahatry ny dosage raha mandalo ianao, marary, voan'ny aretina, na marary. Aza manova ny doka fanafody na fandaharam-potoana raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera anao. Arovy amin'ny hafanana hafanana sy hafanana amin'ny hafanana.
6. Use Megestrol acetatePowders amin'ny olona voafaritra tsara
Karazana herisetra X [Jereo ny Warnings and Precautions (5.2)]. Tsy misy fanazavana momba ny teratôlan'ny biby mety amin'ny toeram-pitsaboana. Ny fihinan'ny ratram-po amin'ny alàlan'ny tsindrona marevaka amin'ny volo madinidra Megestrol (0.02-fold ny dosie ara-pahasalamana) dia nahatonga ny fihenan'ny lanjan'ny foetus sy ny isan'ny teraka velona, ​​ary ny fiterahana ny foetus lahy.
♣ Reny mitaiza
Noho ny mety ho voka-dratsy eo amin'ny zaza vao teraka dia tokony hajanona ny fitsaboana raha ilaina ny vovo-dronono Megestrol.
♣ Fampiasana zaza tsy ampy taona
Tsy nisy ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny psikatiora.
♣ Fampiasana Geriatric
Ny fandinihana ara-pahasalamana momba ny vovony azetrol megaestrol amin'ny fitsaboana ny nonoxia, cachexia, na ny fahaverezan'ny lanjany tsy voatanisa amin'ny mararin'ny SIDA dia tsy ahitana ampaham-pahasalamana marobe taona 65 taona sy antitra mba hamaranana raha toa ka mihaona amin'ny hafa izy ireo noho ny marary. Ny traikefa hafa momba ny fitsaboana dia tsy nahitana fahasamihafana eo amin'ny valin-tenin'ny antitra sy ny marary. Amin'ny ankapobeny, ny fisafidianana ny marary ho an'ny marary efa zokiolona dia tokony hitandrina, matetika manomboka amin'ny faran'ny faran'ny dosing, amin'ny fandinihana ny habetsaky ny fihenan'ny hepatic, ny renena, na ny fiterahana, ary ny aretina mifandray na ny fitsaboana hafa.
Ny vinaingitra azetrolametatra Megestrol dia fantatra amin'ny fivoahana amin'ny voa, ary mety ho lehibe kokoa amin'ny marary manana fihenam-bozaka ny tsy fahampian-tsakafo. Noho ny marary zokiolona dia mety ho nihena ny fihenan-taolana, tokony horaisina amin'ny fikarakarana ny doka ny fitsaboana, ary mety ilaina ny manara-maso ny fihenam-bolo.
♣ Use in Women
Ny vinaingitra azetrol azetrol dia tsy nahazatra ny vehivavy VIH. Ny vehivavy rehetra ao amin'ny 10 ao anatin'ireo fitsapana momba ny tosi-pitenenana dia nitatitra fa niparitaka be ny ra. Ny vovony azetrol acetate dia ny dodege progesterone, izay mety mitarika ny fandosirana vagin-dehilahy amin'ny vehivavy.
Tazony ao anaty vata fampangatsiahana izany fanafody izany, mihidy mafy ary tsy mahatratra ny ankizy. Tehirizo amin'ny hafanana sy ny hafanana tafahoatra (tsy ao amin'ny efitra fidiovana).
Zava-dehibe ny mitazona ny fanafody rehetra tsy hitan'ny maso sy ny fahatratrarana ny ankizy ho toy ny fanaka maro (toy ny mofomamy isan-kerinandro sy ireo ho an'ny fery amin'ny maso, creams, patches ary inhalers) dia tsy manan-janaka ary afaka manokatra azy ireo mora foana ny ankizy. Mba hiarovana ny ankizy tsy ho voapoizina dia alamino ny kapoaky ny fiarovana ary atreho avy hatrany ny fanafody any amin'ny toerana azo antoka - ny iray izay miala sy miala ary mijery azy.
Ny fanafody tsy ilaina dia tokony alaina amin'ny fomba manokana mba hahazoana antoka fa ny biby fiompy, ny ankizy ary ny olona hafa dia tsy afaka mandany azy ireo. Na izany aza, tsy tokony handevona an'io fanafody io eo amin'ny toeram-pivoahana ianao. Fa ny fomba tsara indrindra handraisana ny fanafody dia amin'ny alàlan'ny programa fanafody fitsaboana. Miresaha amin'ny mpivaro-pahaizana na mifandraisa amin'ny sampan-draharahan'ny fako / fikojakoana ao an-toerana mba hianatra momba ny programa miverina ao amin'ny vondrom-piarahamoninao. Jereo ny www.aasraw.com raha mila fanazavana bebe kokoa raha tsy manana fahafahana miditra amin'ny programa famerenana indray ianao.
8. Meestrol acetatelevitra
Megace (megestrol acetate, USP) Oral Suspension dia akora simika nataon-tanana mitovy amin'ny progesterone hormone vehivavy ampiasaina amin'ny fihinanana fahaverezan'ny fahavitrihana sy ny fahavoazana noho ny aretina, ary ampiasaina koa amin'ny fitsaboana ny kanseran'ny nono sy ny homamiadan'ny endometrial. Azo ampiasaina amin'ny endrika generic Megace. Ny voka-dratsin'ny Megace dia:
- fahazoana mavesatra
· Fiovana amin'ny fiankinan-doha
· Fihenan'ny hoditra
· Mitebiteby (lamosina)
· Nihena ny fahaiza-mamaky / firaisana ara-nofo
· Malahelo amin'ny orgasme
Ny vehivavy dia mety mahazo fiovan'ny vanim-potoana mandritra ny vanim-potoana, anisan'izany ny fanalàm-bolo tsy fantatra. Megace Oral Suspension dia 800 mg / andro (20 mL / andro). Megace dia mety hifanerasera amin'ny fitsaboana amin'ny insuline na ny diabeta ary mety hampihena ny vokatr'ireo fanafody ireo, ary mety hitombo ny tahan'ny siramamy. Raha manana diabeta ianao, dia tandremo ny siramamy amin'ny ra ary miresaha amin'ny dokotera raha mahita fiovana tsy mahazatra ianao. Megace dia mety hifanerasera amin'ny fanafody indinavir, na ny insuline na ny fanafody diabeta. Lazao amin'ny dokotera ny fanafody rehetra sy ny fanafody ampiasainao. Tsy tokony hampiasaina i Megace mandritra ny fitondrana vohoka. Mety hampijaly ny foetus izany. Ny vehivavy ao anatin'ny taonan'ny fahanterana dia tokony hifehy ny fampiasana zaza tsy ampy taona rehefa mampiasa io fanafody io. Mety hampiditra rononon-jaza io fanafody io ary mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny zaza tsy ampy taona. Ny fiterahana dia tsy azo omena raha ampiasaina ity zava-mahadomelina ity.
Ny Megace (megestrol acetate, USP) Side Effects Drug Center dia manome fomba fijery feno momba ny fanafody azo avy amin'ny zava-mahadomelina mikasika ny mety ho fiantraikany amin'ny fampidirana ity fanafody ity.
9. Ny fampiasana Megestrol ho fampiasana herin'aratra dia tokony hodinihina tsara
Megestrol acetate (595-33-5) dia solontenan'ny fitrandrahana izay misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fiankinan-doha. Voalohany dia nampiasaina ho mpanelanelana fanabeazana; Na izany aza anefa, ny fiantraikan'ny fampidiran-drongony dia nahatonga ny fampiasana azy amin'izao fotoana izao ho toy ny mpitsabo amin'ny arkeolojika. Ny fitantanana ny MA dia mitombo be amin'ny fahazarana sy ny lanjan'ny vatana amin'ny marary mitondra ny otrik'aretina VIH sy ireo voan'ny homamiadana. MA dia ankatoavin'ny sakafo sy ny fanaovan-tsonia (FDA) amin'izao fotoana izao Mitombo ny fihenan'ny VIH. Ankoatr'izay, na amin'ny salantsalany ara-pahasalamana, sy ny olon-dehibe ary ny olon-dehibe mipetraka amin'ny trano fikarakarana maharitra, ny fampiasana ny MA dia mitombo be ny lanjany. Ny fampiasana fanafody ho an'ny orinasa toy ny MA ao amin'ireto sehatra ireto dia mety amin'ny tsy firaharahiana ny fahavoazan'ny tsy fahampiana mifandraika amin'ny isan'ny maty. Raha ny marina, ny MA dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny lanjan'ny vatan'ny olona sy ny fanirian-doha noho ireo asidra erexigenika hafa toy ny asidra dronabinol sy eicospentaenoic. Na izany aza, ao amin'ny olon-dehibe sy marary manana homamiadana na tsy fahombiazana amin'ny renena, ny tavy no loharanon-kevitra na ny hany tombony amin'ny fahazoana mavesatra, tsy misy firy ny hozatry ny taolam-paty na zavatra hafa tsy misy fatotra. Anisan'ny vokatry ny fampiasana ny MA, ny fihenan'ny testosteron sy ny famokarana estrogen dia manan-daza. Alohan'ny fampiasana ny fomba fitsaboana hafa mahomby amin'ny androgen (flutamide, bicalutamide) amin'ny lehilahy voan'ny homamiadan'ny prostate, MA dia matetika no ampiasaina amin'io toerana io. Raha ny marina, amin'ny lehilahy zokiolona, ​​ny fampiasana ny MA dia vokatra amin'ny testosteron akaiky. MA dia nampiasaina ihany koa mba hanesorana ny estrogen amin'ny vehivavy voan'ny kanseran'ny nono.
Ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ity JCEM ity tamin'ity volana ity dia nandinika ny vokatry ny testosteron sy ny MA amin'ny fampitomboana ny lanjan'ny lanjany amin'ny marary mitondra ny otrik'aretina VIH. Ity fanadihadiana ity dia mampiseho indray mandeha fa ny MA dia misy fiantraikany goavana amin'ny lanjany sy ny lanjany, miaraka amin'ny fiterahana matavy indrindra ny singa fototra amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny vatana. Na izany aza, ny lanjan'ny fatin-tsakafo dia nitombo ihany koa niaraka tamin'ny lanjan'ny vatana manontolo tamin'ity fitsapana ity, toy ny fanandramana taloha ny vokatry ny MA momba ny lanjany ho an'ny mararin'ny VIH. Mulligan et al.showed that testosterone was suppressed, and replacement of testosterone had no effect on the composition of the weight gain; Ankoatra izany, ny fitantanana ny MA dia nitarika ny fihenan'ny libido. Io vokatra mahatsiravin'ny MA amin'ny famokarana testosterone io sy ny fanakanana ny vokatry ny testosterone amin'ny famerenam-bolo mena dia tokony hodinihina amim-pitandremana mialoha ny fampiasana MA amin'ity olona marary ity. Ny fatiantoka goavambe amin'ny mararin'ny VIH dia mifamatotra mafy amin'ny haavon'ny androgen ambany.
Maro ireo fanontaniana tsy voavaly momba ny vokatry ny MA. Ny fampiasana azy dia tsy maintsy dinihina amim-pitandremana sy hikarakara tsara. Raha toa ny fanatsarana ny fialan-tsasatra sy ny tombom-barotra amin'ny tavy matavy dia tanjona tsara amin'ny fitantanana ny cachexia na ny fahaverezan'ny lanjan'ny tsy fahampiana, MA dia iray amin'ireo mpitsabo malemy indrindra amin'izao fotoana izao. Ny fampiasana azy dia tsy maintsy alavaina amin'ny mety hisian'ny fanakanana adrenana sy ny famafazana ny famokarana androgen. Noho ny toetrany fanoherana ny otrikaretina, ny vokatry ny antianabolic MA dia tsy amperioran'ny fitantanana testosterone.
10. Inona no fampahalalana manan-danja tokony ho fantatro momba Megetrol Acetatevovoka?
Ny vovoka azetrol Megetrol dia mety hanimba zaza vao teraka na miteraka fahavoazana. Aza mampiasa megestrol raha bevohoka ianao.
Alohan'ny handraisanao vovoka megestrol, dia lazao amin'ny dokotera raha manana diabeta ianao na tantaram-panafody na raokandro.
Mety mila miova ny filahatry ny dosage raha mandalo ianao, marary, voan'ny aretina, na marary. Aza manova ny doka fanafody na fandaharam-potoana raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera anao.
Megace ES dia manana fifandimbiasan-tsakafo megestrol megestrol bebe kokoa noho i Megace. Anontanio ny mpanamboatra anao raha manana fanontaniana momba ny fitsaboana azonao amin'ny pharmacy.
11. Aiza no ahafahako mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny Megestrol Acetate?
♣ Marika: Megace®, Megace® ES
Tags: Buy Megestrol acetate powder, Megestrol acetate poids
Firy ny 4-DHEA miverina amin'ny testosterone? Fanafody fanandramana J147 (1146963-51-0) Ny fahanteran'ny Alzheimer